किन कुटिए दमकमा पत्रकार ? - Baikalpikkhabar
किन कुटिए दमकमा पत्रकार ?
१७ मंसिर/ मालपोत कार्यालय दमकका एक कर्मचारीले घुस खाएको विषयलाई लिएर भिडीयो खिचेको भन्दै झापाका पत्रकार खगेन्द्र घिमिरेमाथि हातपात भएको छ ।
शिवसताक्षीका एक जनासेवाग्राहीसंग जग्गा रोक्का वापत १० हजार रुपैयाँ घुस रकम लिएको दाबी गर्दै भिडियोसहितको रिपोर्टिङ गरिरहेका पत्रकार घिमिरेमाथि मालपोत कार्यालय भित्रै हातपात भएको बताइएको छ ।
कार्यालयभित्रै कर्मचारी इन्द्र राजवंशीसहित लेखापढी व्यवसायीले हातपात गरेका घिमिरेको आरोप छ । मालपोत कार्यालयमा कर्मचारी राजवंशीलाई सेवाग्राही सुरेश साहले १० हजार रुपैयाँ घुस दिएको प्रमाणका रुपमा भिडियो खिचेको बताए ।
कुटपिटमा संलग्नहरु बिरुद्ध घिमिरेले इलाका प्रहरी कार्यालय दमकमा किटानी जाहेरी समेत दर्ता गराएको बताएका छन । घिमिरे अनुसन्धान अनलाइन टिभीमा कार्यरत छन् । प्रहरीले सो घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।
घिमीरे अनुसन्धान अनलाइन टिभीमा कार्यरत छन् । यसैबीच पत्रकार माथि भएको आक्रमणको पत्रकारसहित त्यसका संघसंगठनहरुले निन्दा गर्दे दोषी माथि कडा कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।
बुधबार, १७ मंसिर, २०७७, बिहानको १०:३१ बजे